kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး's Page - Myanmar in Singapore
kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး
Share Blog Posts (304)Discussions (6)Events in SingaporeGroupsPhotosPhoto Albums kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး's Likes Kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး's Friends
kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး has not received any gifts yet
kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး's Page
kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး postedablog post“ရွှေအိုရောင် ဒုက္ခများ ”“ရွှေအိုရောင် ဒုက္ခများ ”လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လ လောက်က ပေါ့။နေ့လည်ပိုင်း မှာ ကျုပ်ရဲ့အိမ်က “ချုပ်ကြီး “ ဖုန်းဆက်လာပါတယ်။သူဖုန်းဆက်ပြီးဆိုရင် သူ ဖြေရှင်းလို့မရ တဲ့ ပြဿ နာ တစ်စုံ တစ်ရာအိမ်မှာဖြစ်နေပြီ ဆို တာ ကျုပ်အတတ်သိပြီးသား။“ပြော ဘာဖြစ်လဲ”“ ဟို ဟာ လေ အိမ်က အိမ်က ……… ““ ပြောလေဟာ ညည်း ဆက်မှတော့ အိမ်က မှန်း သိတာ ပေါ့ ““ နောက်ဖေး လေ နောက်ဖေး ““ ဘာလဲ နောက်ဖေးအိမ်က အမေကြီး ဘာဖြစ်လို့လဲ ““ အော် ရှင်ကလဲ လော လိုက်တာ တာ ဒီက ဘာ စ ပြောရ မှန်း မသိတဲ့ဟာကို၊ကဲ နား ထောင် ဖြတ်မပြော နဲ့ ၊အိမ်က အိမ်သာ က ပြည့် ပြီး…See MoreJun 16, 2014 0
Mar Mar Swe liked kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး's blog post “လှည့်ကွက် ဟုတ်၏ ………မဟုတ်၏”Jun 15, 2014kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး postedablog post“လှည့်ကွက် ဟုတ်၏ ………မဟုတ်၏”“လှည့်ကွက် ဟုတ်၏ ………မဟုတ်၏” မဆလ ခေတ်အစက နေပြီးရှစ်လေးလုံးမတိုင်ခင်ကျနော်တို့ကျောင်းသားဘ၀ ကစ လို့လူလတ်ပိုင်းအရွယ် အထိကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေပါး စပ် ပိတ် နုတ်ပိတ်နေခဲ့ကြ ရ ပါ တယ်။ကျနော်တို့ဘာကိုမှ ပြန်ပြောခွင့် မရှိ။ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်မရှိ။မေးမြန်းခွင့်မရှိ။ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိ။ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့် မရှိ။မရှိဆို ဘာမှ မရှိ။ အကန်းလိုလိုအ အလိုလိုင တုံးလိုလိုနဲ့ ဘ၀ ကိုကြီးပြင်းဖြတ်သန်းခဲ့ ကြရပါတယ်။အဲဒီအခါမှာ ကျနော် တို့ ရလိုက်တာကတော့မကျေနပ်ခြင်းဆိုိ တဲ့ အစိုင် အခဲ ပါဘဲ။ရင် ထဲ မှာ ကိန်း အောင်း…See MoreJun 12, 2014 0
kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး postedablog post" ကန်တော့ ရ သော အကျုိး အား ကြောင့်"“ကန်တော့ ရသော အကျိုး အားကြောင့်”ဒီနှစ် သ င်္ကြန် တွင်း က တော့ ဦး အောင် မောင်း အ ဖို့ ပျင်းစ ရာေ ကာင်း လှ ပေ သည်။ ဦးအောင် မောင်း ဆီ ကို ခါ တိုင်းလို လာ သော ဧည့် သည် မရှိ။ တပည့် တပန်း များ က လဲ မလာ ကြ။ဧည့် သည် မ လာ တော့ ဧည့် ခံ စ ရာ မ လို။အချိန် တွေ ပို နေသည်ပေါ့။တပည့် တပန်း များ လဲ မ လာ ကြတော့ ဟို အ ကြောင်း ဒီ အကြောင်း ပြော စ ရာ မလို။လက် ဖက် ရည် ဆိုင် ဖြစ် ဖြစ် ဘီယာ ဆိုင်ဖြစ် ဖြစ် သွား ဘို့ မလို။ဒီ တော့ အချိန် တွေ ပို နေ သည် ပေါ့။တစ်ယောက် ထဲ လဲ အပြင် ထွက် သောအ ကျင့် က မ ရှိ။သင်္ကြန် ရေ စို…See MoreApr 23, 2014 0
kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး commented on kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး's blog post “ ကူ ညီ စ ရာ ရွှေ ပြည် သာ က သီ လ ရှင် ကျောင်း က လေး “"9-3-2014 နေ့ ထိ စု စု ပေါင်း ကောက် ခံ ရ ငွေ မှာ 1278200ကျပ် နှင့်ှS$ 210 ဖြစ် ပါ သည်။
၀ိုင်းဝန်း ၍ ကူညီ လှူ ဒါန်း ကြ သူ အပေါင်း အား
ကျေး ဇူး တင် ရှိ ပါ တယ် ခင် ဗျာ"Mar 9, 2014kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး commented on kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး's blog post “ ကူ ညီ စ ရာ ရွှေ ပြည် သာ က သီ လ ရှင် ကျောင်း က လေး “"9-3-2014 နေ့ တွင် မန္တလေး မြို့ မှ မ နီလာ မိသားစု မှ ကျပ်နှစ် သောင်း လှူဒါန်းသည်
ကို ကျေးဇူး တင်စွာ လက် ခံ ရ ရှိ ပါသည် ခင်ဗျား။"Mar 9, 2014aye aye than liked kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး's blog post “အ တွေး ပါး ပါး လေး”Mar 6, 2014AyeMyint Tun liked kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး's profileMar 6, 2014kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး postedablog post“မ မှီ စ ကောင်း ……………မှီ စကောင်း ” “မ မှီ စ ကောင်း ……………မှီ စကောင်း ” တ ရုပ် နှစ် သစ် ကူး ရက် က ကျ နော် တို့ အ လုပ် လဲ ပိတ် ပါ တယ်။ဒီ တော့ မ ရောက် တာ ကြာ တဲ့ ပြင် ဦး လွင် ကို ဆိုင် ကယ် နဲ့  တက် ဖြစ် ပါ တယ်။မ ဟာ အံ့ ထူး ကံ သာ ဘု ရား ကြီး ကို အ ရင် ၀င် ဖူး ပြီး တော့ မြို့ ထဲ က မိတ် ဆွေ အိမ် ကို ၀င် ပြီး မာကြောင်း သာ ကြောင်း လေး ပြော ပြီး ပြန်ခဲ့ ပါ တယ်။ အဲ ဒီ က အ ပြန် မှာ တော့ ကန် တော် ကြီး အမျိုး သား ဥ ယျာဉ် ကို ၀င် ပါ တယ်။ဆိုင် ကယ် အပ် ခ ကျပ် ၅၀၀ ထုတ် ပေး တော့ ဆိုင် ကယ် လက် ခံ တဲ့ ကောင် လေး ကဆိုင် ကယ်…See MoreMar 6, 2014 0
kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး postedablog post“ငဲ့ စောင်း ကြည့် ၏ မကြည့် ၏ ( မန္တ လေး မျက် ပါး ရ ပ် မှ ရွှေ ဆိုင်း လုပ်ငန်းအ ကြောင်း)” “ငဲ့ စောင်း ကြည့် ၏ မကြည့် ၏ ( မန္တ လေး မျက် ပါး ရ ပ် မှ ရွှေ ဆိုင်း လုပ်ငန်းအ ကြောင်း)” ဒီ နေ့ နေ့ လည် လက် ဖက် ရည် ဆိုင် ရောက် တော့ ရွှေဆိုင်းလုပ်ငန်း လုပ်တဲ့ မိတ် ဆွေ နဲ့ တွေ့ ပါတယ်။ကျ နော် လဲ မြင် ရော“ကို ပေါက်ရေ ကျုပ် တို့ လုပ် ငန်း တွေ တော့ ပျက် တော့ မယ် ထင် တယ် ဗျို့”ဆို ပြီး စ ပြော ပါ တယ်။“ဘာ တွေ ဖြစ် ကုန် ပြီ လဲ ပြော ပါ အုံး ဗျ” လို့ ထပ်မေး မှ“ ဒီ လို ဗျ ဒီ နှစ်ရွှေ တိ ဂုံ ဘု ရား အ တွက် ရွှေ ဆိုင်း လေ လံ အောင် သွား တဲ့ လူ ကကျုပ်တို့ လို မိ ရိုး ဖ လာ လုပ် ရွှေ ဆိုင်း လုပ် တဲ့ သူ…See MoreMar 4, 2014 0
kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး commented on kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး's blog post “ ကူ ညီ စ ရာ ရွှေ ပြည် သာ က သီ လ ရှင် ကျောင်း က လေး “"4-3-2014 နေ့ တွင်
ချော (အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) ဓါတ်ပုံ ပညာ ရှင် မှ ကျပ် တစ်သိန်းနှင့်
ကို မျုိးမင်းပိုင် ( မိုး မိတ်) မှ သုံးသောင်းငါးထောင်ကျပ် လှူ ဒါန်းသည်
ကို ကျေး ဇူး တင် ရှိ စွာ ဖြင့် လက် ခံ ရ ရှိ ပါ သည်ခင် ဗျာ။
စု စု ပေါင်း အ လှူ ငွေ စာ ရင်း…"Mar 4, 2014kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး postedablog postလမ်း ခွဲ က လေး နှစ် ခု" “လမ်းခွဲ ကလေး နှစ် ခု “ မ နေ့ ည နေ ထ မင်း စား ပြီး တော့ ဖေစ့် ဘုတ် ကို ၀င် ကြည့် နေ တုန်း အိမ် ရှေ့ ကခေါ် သံ ကြား လို့ကြည့် လိုက် တော့ ဟို အ ရင် က ကျ နော် တို့ ရုံး မှာ အ လုပ် လုပ် သွား တဲ့ က လေးမ လေး ဖြစ် နေပါ တယ်။ “ဖိတ် စာ လာ ပေး တာ လေး ပေါက်”“ အော် ညည်း စွံ ပြီ ပေါ့ “ လို့ ကျ နော် က ပြော တော့ သူ က ရီ ကျဲ ကျဲ လုပ် နေ ပါ တယ်။“ဥ ပုဒ် နေ့ ဆို တော့ လေး ပေါက် လဲ အား တယ် မ လား လာ ဖြစ် အောင် လာ နော်”လို့ ပြော တော့ ခေါင်း ငြိတ် ပြ လိုက် ပါတယ်။“သ မီး သွား အုံး မယ် ဖိတ…See MoreFeb 27, 2014 0
kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး commented on kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး's blog post “ ကူ ညီ စ ရာ ရွှေ ပြည် သာ က သီ လ ရှင် ကျောင်း က လေး “"S'POR တွင် နေ ထိုင် ကြ သော မိတ် ဆွေ များ လည်း ဆု ပြည့်​
#05-65 , Peninsula Plaza
9644 1151 , 6337 5003 မှာ လှူဒါန်း နိုင် ပါတယ်။ နည်း များ မ ဆို ပါ ၀င် လှူဒါန်း ကြ စေ လို ပါ တယ် ခင်ဗျာ။"Feb 25, 2014kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး postedablog post“ ကူ ညီ စ ရာ ရွှေ ပြည် သာ က သီ လ ရှင် ကျောင်း က လေး ““ ကူ ညီ စ ရာ ရွှေ ပြည် သာ က သီ လ ရှင် ကျောင်း က လေး “ မြန် မာ ဂေ ဇက် အ ဖွဲ့  ၀င် ကျ နော် မိတ် ဆွေ တစ် ယောက် က ခေါ် သွား တာ နဲ့ ရွှေ ပြည် သာ ဘက် ကသီ လ ရှင် ကျောင်း လေး တစ် ကျောင်း ကို ကျ နော် ရောက် ခဲ့ ရ ပါတယ်။ ကျောင်း အ မည် က “ ဓ မ္မ ရံ သီ သီ လ ရှင် ကျောင်း ” လို့ အ မည် ရ ပါ တယ်။ကျောင်း မှာ က မယ် သီ လ ရှင် အား လုံး ငါး…See MoreFeb 24, 2014 4
red tulip commented on kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး's blog post “ကျ နော်…….ဟာ….”"ကဗျာကို နှစ်သက်သော၊ ကဗျာရေးခြင်းကို ဘ၀အတွက် မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားသည်။
ခံ စား ချက် များ ကို
အ တွေး ထဲ မှာ ထည့် သိပ်
က ဗျာ များ အ ဖြစ်
ပြောင်း လဲ တတ် သူ ဖြစ်တယ်.... အဲဒါလေးတွေကြိုက်တယ်"Feb 23, 2014red tulip liked kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး's blog post “ကျ နော်…….ဟာ….”Feb 23, 2014 More... RSS
ကိုပေါက်လက်ဆောင် အတွေးပါးပါးလေးဆိုတဲ့ အမှတ်အသားနဲ့ပါ
ဒီဆိုက်လေးတွေက လက်ဆောင်ရထားတဲ့ ဒိုမိန်းတွေပါ။
mandalay gazette, poemscornor
မြန်မာသူငယ်ချင်းများ ချောကလက်မြို့တော် futuredream
forverfriend ဆိုက်တွေမှာ ကိုပေါက် မန္တလေး နာမယ်နဲ့စာတွေ ရေးနေပါတယ်။
ရေးပြီးတိုင်း ဆိုက်အားလုံးကို တစ်ပြိုက်နက်ထဲတင်ပါတယ်။
Kopauk mandalay ကိုပေါက် မန္တလေး's Blog
“ရွှေအိုရောင် ဒုက္ခများ ”
Posted on June 16, 2014 at 11:10am0Comments
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လ လောက်က ပေါ့။
နေ့လည်ပိုင်း မှာ ကျုပ်ရဲ့အိမ်က “ချုပ်ကြီး “ ဖုန်းဆက်လာပါတယ်။
သူဖုန်းဆက်ပြီးဆိုရင် သူ ဖြေရှင်းလို့မရ တဲ့ ပြဿ နာ တစ်စုံ တစ်ရာအိမ်မှာ
ဖြစ်နေပြီ ဆို တာ ကျုပ်အတတ်သိပြီးသား။
“ ဟို ဟာ လေ အိမ်က အိမ်က ……… “
“ ပြောလေဟာ ညည်း ဆက်မှတော့ အိမ်က မှန်း သိတာ ပေါ့ “
“ နောက်ဖေး လေ နောက်ဖေး “
“ ဘာလဲ နောက်ဖေးအိမ်က အမေကြီး ဘာဖြစ်လို့လဲ “
“ အော် ရှင်ကလဲ လော လိုက်တာ တာ ဒီက ဘာ စ ပြောရ… Continue “လှည့်ကွက် ဟုတ်၏ ………မဟုတ်၏”
Posted on June 12, 2014 at 12:05pm0Comments
“လှည့်ကွက် ဟုတ်၏ ………မဟုတ်၏”
မဆလ ခေတ်အစက နေပြီး
ရှစ်လေးလုံးမတိုင်ခင်ကျနော်တို့ကျောင်းသားဘ၀ ကစ လို့
ပါး စပ် ပိတ် နုတ်ပိတ်နေခဲ့ကြ ရ ပါ တယ်။
မရှိဆို ဘာမှ… Continue " ကန်တော့ ရ သော အကျုိး အား ကြောင့်"
Posted on April 23, 2014 at 10:00am0Comments
“ကန်တော့ ရသော အကျိုး အားကြောင့်”
ဒီနှစ် သ င်္ကြန် တွင်း က တော့ ဦး အောင် မောင်း အ ဖို့ ပျင်းစ ရာေ ကာင်း လှ ပေ သည်။ ဦးအောင် မောင်း ဆီ ကို ခါ တိုင်းလို လာ သော ဧည့် သည် မရှိ။ တပည့် တပန်း များ က လဲ မလာ ကြ။ ဧည့် သည် မ လာ တော့ ဧည့် ခံ စ ရာ မ လို။
အချိန် တွေ ပို နေသည်ပေါ့။
တပည့် တပန်း များ လဲ မ လာ ကြတော့ ဟို အ ကြောင်း ဒီ အကြောင်း ပြော စ ရာ မလို။
လက် ဖက် ရည် ဆိုင် ဖြစ် ဖြစ် ဘီယာ ဆိုင်ဖြစ် ဖြစ် သွား ဘို့ မလို။
ဒီ တော့ အချိန် တွေ ပို နေ သည်… Continue “မ မှီ စ ကောင်း ……………မှီ စကောင်း ”
Posted on March 6, 2014 at 12:22am0Comments
“မ မှီ စ ကောင်း ……………မှီ စကောင်း ”
တ ရုပ် နှစ် သစ် ကူး ရက် က ကျ နော် တို့ အ လုပ် လဲ ပိတ် ပါ တယ်။
ဒီ တော့ မ ရောက် တာ ကြာ တဲ့ ပြင် ဦး လွင် ကို ဆိုင် ကယ် နဲ့  တက် ဖြစ် ပါ တယ်။
မ ဟာ အံ့ ထူး ကံ သာ ဘု ရား ကြီး ကို အ ရင် ၀င် ဖူး ပြီး တော့ မြို့ ထဲ က မိတ် ဆွေ အိမ် ကို ၀င် ပြီး မာကြောင်း သာ ကြောင်း လေး ပြော ပြီး ပြန်ခဲ့ ပါ တယ်။
အဲ ဒီ က အ ပြန် မှာ တော့ ကန် တော် ကြီး အမျိုး သား ဥ… Continue AddaBlog Post
At 11:30pm on January 6, 2013, ၀တ်မှုန် said… ကိုပေါက်ခင်ဗျဘယ်လိုနည်းနဲ့ မြန်မာစင်ကာပူမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေပါသလဲ...မန္တလေးမှာ အွန်လိုင်းကောင်းကောင်းရထားပုံရတယ်နော်..
At 5:45pm on June 25, 2012, ♥**ေ*န*လ*င်း*♠•••☺ said… ကိုပေါက်ရေ လည်လည်လာခဲ့ပါတယ် အစ်ကိုက မသိပင်မဲ့ ကျွန်တော်နေလင်းကသိပါတယ်...
ခင်မင်ခွင့်ရမလားဗျ.. သူငယ်ချင်းအဖြစ် အပ်ခဲ့ပါတယ်.. အတည်ပြုပေးမယ်လို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ်...
ကဗျာ လက်ဆောင်လေးထားခဲ့ပါတ.ယ်ခင်ဗျာ... လေးစားလျက် (နေလင်း)
အလှပြည့်တွေ့ရမည်တည့် တွေ့ရမည်မြန်မာ့မြေ မြန်မာ့အလှတွေ့မြင်ရမည်ရှစ်မျက်နှာအရပ်ဆီဘယ်ဆီကို ကြည့်ကြည့်ကျွန်းသစ်ရေနံနှင့်စိန်ကျောက်သံ သယံဇာတအလှတွေပြည့်..။တွေ့ရမည်တည့် တွေ့ရမည်မြန်မာ့မြေ မြန်မာ့အလှတွေ့မြင်ရမည်ရှစ်မျက်နှာအရပ်ဆီဘယ်ဆီကို ကြည့်ကြည့်ဆည်မြောင်းတာတမံနှင့်မြစ်ချောင်းကန် ပြည့်ကြွယ်ဝအလှတွေပြည့်..။တွေ့ရမည်တည့် တွေ့ရမည်မြန်မာ့မြေ မြန်မာ့အလှတွေ့မြင်ရမည်ရှစ်မျက်နှာအရပ်ဆီဘယ်ဆီကို ကြည့်ကြည့်လမ်းတံတားအဖြာဖြာနှင့်သွားလာရာလွယ်ကူလှအလှတွေပြည့်..။တွေ့ရမည်တည့် တွေ့ရမည်မြန်မာ့မြေ မြန်မာ့အလှတွေ့မြင်ရမည်ရှစ်မျက်နှာအရပ်ဆီဘယ်ဆီကို ကြည့်ကြည့်ဘု၇ားစေတီ ဂူပုထိုးရယ်လို့ရှိခိုးကားဖူးမ၀အလှတွေပြည့်..။တွေ့ရမည်တည့် တွေ့ရမည်မြန်မာ့မြေ မြန်မာ့အလှတွေ့မြင်ရမည်ရှစ်မျက်နှာအရပ်ဆီဘယ်ဆီကို ကြည့်ကြည့်တိုင်းရင်းသားရှိ အားလုံးစည်းလုံးကာ ချစ်ကြည်မြအလှတွေပြည်..။တွေ့ရမည်တည့် တွေ့ရမည်မြန်မာ့မြေ မြန်မာ့အလှတွေ့မြင်ရမည်ရှစ်မျက်နှာအရပ်ဆီဘယ်ဆီကို ကြည့်ကြည့်အလှတွေ ရှူမဆုံးပါဘုနှလုံးမှာ ပီတိဖုံးပါလိုပပြုံးပန်းတွေ ကိုယ်စီဆင်ကြတယ်(ကွယ်)... အလှတွေပြည့်...။
နောက်မှ ဆက်လာလည်တော့မယ် ခင်ဗျာ.. At 1:41pm on February 17, 2012, မင်းနန္ဒကျော်ခေါင် said… အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆိုက်တစ်ခုပဲဗျာ
အမြဲတမ်း ၀င်တော့မယ် ဟီးဟီး At 1:45pm on April 29, 2011, moesetlaylin said… တကယ် စနေနံကို စိတ်နာတာလား ...
At 12:04pm on January 27, 2011, may said… Hi Dear Kopauk (mdy),
I like all of ur post....very nice...
Thank u so much for ur sharing knowledge....
Haveanice dayyyyyy......!
At 12:42am on December 27, 2010, grace mm said… I ady read some of your post on ur blog and put it under my favorite. i'll often visit ur site as well. :) Happy New Year At 6:13pm on December 26, 2010, manawphyulay said… မင်္ဂလာပါ ကိုပေါက် မန်းလေးရှင့်............ တွေ့ဆုံခွင့်ရခြင်းဟာ မင်္ဂလာတစ်ပါး မဟုတ်ပါလားရှင်... No comments yet!